Isiokwu Afọ 2016—Ndị Hibru 13:1 | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2016
“Ka ịhụnanya ụmụnna unu dịgide.”—Ndị Hibru 13:1
Jizọs sịrị na ‘ọtụtụ ndị ga-akpọ ibe ha asị, nakwa na ịhụnanya nke ndị ka n’ọnụ ọgụgụ ga-ajụkwa oyi.’ (Mat. 24:10, 12) Ihe ndị a Jizọs kwuru gosiri na ihe a ga-eji mara ndị mmadụ n’oge a ga-ebibi Jeruselem n’afọ 70 bụ na ha agaghị na-ahụ ibe ha n’anya. Ma, ndị na-eso ụzọ Kraịst ga-adị iche. Ihe a ga-eji mara ha bụ na ha hụrụ ibe ha n’anya. (Jọn 13:35) Ọ ga-abụ na obi tọrọ ndị Hibru bụ́ Ndị Kraịst ụtọ mgbe ha gụrụ akwụkwọ ozi Pọl detaara ha nke gosiri na o kwetara na ha hụrụ ụmụnna ha n’anya, na-agbakwa ha ume ka ha nọgide na-ahụ ụmụnna ha n’anya.
Ọ fọla obere ugbu a ka ebibie ụwa Setan. Ndị anyị na ha bi n’oge a bụ ndị hụrụ ego n’anya, ndị hụrụ ihe ụtọ n’anya, na ndị hụrụ onwe ha n’anya ma ha ahụchaghị Chineke na ndị agbata obi ha n’anya. E nwekwara ụdị ndị a n’oge ndịozi Jizọs. (2 Tim. 3:1-4) N’agbanyeghị na anyị na ndị dị otú a bi, anyị bụ́ Ndịàmà Jehova hụrụ ibe anyị n’anya n’ụwa niile. Ka anyị nọgide na-ahụ ụmụnna anyị n’anya, si otú ahụ na-eto Jehova bụ́ Chineke nke ịhụnanya.